Ampaham-piainana Mahatalanjona Ao Nepal Atolotr’ireo Nandresy Tamin’ny Fifaninanana Sary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Aogositra 2016 14:25 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, عربي, Italiano, English
Sary nandresy tao amin'ny sokajy Sarin'ny taona, sary an'i Deepak Ratna Bajracharya. Nahazoana lalana: Klioban'ny Mpakasary fanao an-gazety, Nepal.
Nandritra ny herinandro faran'ny volana Jolay, nanambara ireo mpandresy tamin'ny fifaninanana sary IME-Global IME Bank Nepal tamin'ity taona ity ny Klioban'ny Mpakasary fanao an-gazety ao Nepal, izay nanome ny loka vola betsaka indrindra ho fankasitrahana tamin'ny fifaninanana sary tao Nepal. Ireo sokajy dia nahitana ny kolontsaina sy fizahantany, fiainana andavanandro, natiora sy bibidia, ny tsikin'i Nepal, fanatanjahantena vaovao, sary tantara ary sarin'ny taona.
Ny fifaninanana, izay nokarakarain'ny Klioban'ny Mpakasary fanao an- gazety, dia nahasarika fidirana mpakasary, mpankafy sy matihanina marobe. Fitambarana sary miisa 6,670 ambany karazany fito samihafa no naroson'ny mpakasary 811 tamin'ity taona ity.
Niala tamin'ny fenitra nahazatra, pretra sady mpankafy maka sary antsoina hoe Deepak Ratna Bajracharya no nandresy tamin'ny sokajy “ny sarin'ny taona” tamin'ny fakàna saiky teo noho eo ny taorian'ilay horohorontany nandravarava izay nampihorohoro an'i Nepal tamin'ny Aprily 2015, nampiazana aina an'arivony.
Bikas Rauniar, mpamoaka sary teo aloha niaraka tamin'ny Kantipur Publications, nampiako ny vaovaon'ny fandresen'i Bajracharya tao amin'ny Facebook :
Arahabaina ny mpandresy lehibe tamin'ny fifaninanana sary nampanaovin'ny PJ, Deepak Ratna Bajracharya, pujari avy amin'ny tempolin'ny sankata, noho izy teo amin'ny toerana tsara tamin'ny fotoana nety ary tamin'ny fakàna sary tena mahery ny horohorontany !
Raha maro tamin'ireo sary nahazo loka no manasongadina ny fiainana andavanandro tao Nepal, tao amin'ny sokajy vaovao, dia sary mampihoron-koditra ahitana tratranà tovolahy iray voafandrika tambany korontan-trano rava nirodana no nahazo ny toerana voalohany. Toy izany koa, ilay sary ahitana ny setroka sy vovoka teny amin'ny lanitry ny tanànan'i Khokana no nahazo ny toerana faharoa tao amin'ny sokajy vaovao.
Fampitandremana: sary mahery setra etsy ambany.
Vatan'ny niharam-boina iray voafandrika tao ambany koronam-bato tao Kathmandu, Nepal, ny 25 Aprily 2015 taorian'ny horohorontany. Ilay horohorontany somary nahery, maridrefy 7.9 namely ny andrefan'ilay renivohitra Nepaley fahiny tao Kathmandu ny Sabotsy, nahafatesana olona manodidina ny 9000. Sary avy amin'i Navesh Chitrakar. Nahazo lalana: Klioban'ny Mpakasary fanao an-gazety, Nepal.
Na izany aza, tsy ny olon-drehetra no mihevitra ireny sary ireny ho ny mendrika. Nisioka ny olona iray:
Misy olona tokony mampianatra ny asa fanaovana gazety an'ireo mpanao gazety mizara sarim-paty milona anaty rà amin'ny aterineto sy Facebook.
Setroka sy vovoka mijolofotra amin'ny lanitry ny tanànan'ny Khokana avy ao amin'ny distrikan'i Lalitpur minitra roa taorian'ny nisian'ilay horohorontany nandravarava ny Sabotsy 25 Aprily 2015. Sary avy amin'i Rajesh Gurung. Nahazoana lalana: Klioban'ny Mpakasary fanao an-gazety, Nepal.
Ankehitriny, ndeha hiroboka ao anatin'ireo fotoan-tsambatra azon'ireo mpakasary isika.
Vehivavy Hindoa mandrehitra jiro solitany manao ny fomba nentim-paharazana nandritra ny fetin'ny Bala Chaturdashi tao amin'ny tempolin'ny Bajrabarahi tao Lalitpur, Nepal, tamin'ny Alarobia 15 Septambra 2014. Nahazo ny laharana voalohany tamin'ny sokajy kolontsaina sy fizahantany. Sary avy amin'i Dinesh Shrestga. Nahazoana lalana: Kliobain'ny Mpakasary fanao an-gazety, Nepal.
Ny fety Nepaley dia ampahan'ireo lova manankarenan'ny firenena. Amin'ireo fety maro, ity iray ity no Kartik Naach (Dihin'ny Zanahary Kartik) fanao isan-taona izay naseho an-tsehatra tany amin'ny kianjan'i Patan Durbar. Kartik Naach dia fetin'ny dihy nentin-drazana sy tantara an-tsehatra ao anatin'ny iray volana izay atao any amin'ny volana KArtik amin'ny tetiandro Hindoa, izay milatsaka amin'ny Oktobra/Novambra. Toerana fahatelo nandresy tamin'ny sokajy kolotsaina sy fizahantany. Sary avy amin'i Avash Karmacharya. Nahazoana lalana: Klioban'ny Mpakasary fanao an-gazety, Nepal.
Zazavavy mitsambikina eo ambonin'ireo fantson-drano maloto. Toerana voalohany, nandresy tamin'ny sokajy fiainana andavanandro. Sary avy amin'i Naresh Shrestha. Nahazoana lalana: Kliobain'ny Mpakasary fanao an-gazety, Nepal.
Vehivavy mandeha miaraka amin'ny zaza roa teny an-dàlan'izy ireo avy any Samzong ho any Lomanthang. Ny Havoana Mustang dia faritra lavitra sy mitokana amin'ny Himalaya Nepaley. Faritra tsy misy miaramila hatramin'ny 1992 ny Havoana Mustang, izay mahatonga azy ho anisan'ireo faritra voaaro indrindra erantany, mbola mitohy mampiasa ny fiteny nentin-drazan'ny Tibetàna Nepaley ny vahoaka ao. Ny kolotsaina Tibetàna dia voatahiry noho ny fitokanany monina tamin'ny tontolo ivelany. Toerana faharoa, nandresy tamin'ny sokajy fiainana andavanandro. Sary avy amin'i Gopen Rai. Nahazoana lalana: Klioban'ny Mpakasary fanao an-gazety, Nepal.
Vehivavy mitondra ny fitaovana vita amin'ny hazo mba hanamboarana taratasy teratany Nepaley vita tanana, Kathmandu ny 9 Janoary 2015. Vita avy amin'ny Lokta ny taratasy vita tanana, akora fototra hita any amin'ny haavo 6,500 feets (1981.2 m) ka hatramin'ny 9,500 feets (2895.6 m) ambonin'ny ranomasina. Amin'ny ankapobeny, ampiasaina amin'ny tanjona ofisialy sy ara-pomba ilay taratasy, ary izy io dia efa fantatra ho anisan'ireo vokatra 19 afaka aondrana ao amin'ny firenena. Toerana fahatelo tamin'ny sokajy fiainana andavanandro. Sary avy amin'i Pratap Thapa. Nahazoana lalana: Klioban'ny Mpaksary fanao an-gazety, Nepal.
Vorombola avy ao amin'ny Vala Nasionalin'i Chitwan. Toerana voalohany, nandresy tamin'ny sokajy natiora sy biby. Sary avy amin'i Ramesh Kumar Poudel. Nahazoana lalana: Klioban'ny Mpakasary fanao an-gazety, Nepal.
Fitia Fahavaratra. Toerana faharoa, nandresy tamin'ny sokajy natiora sy biby. Sary avy amin'i Bishop Tamrakar. Nahazoana lalana: Klioban'ny Mpakasary fanao an-gazety, Nepal.
Vorondolo tazana nipetraka tao amin'ny lavaka akaniny. Toerana-fahatelo, nandresy tamin'ny sokajy natiora sy ny biby. Sary avy amin'i Bikash Khadge. Nahazoana lalana: Klioban'ny Mpakasary fanao an-gazety, Nepal.
Lehilahy antitra iray mampiseho fotoam-pifaliana ary mankafy ao amin'ny toerana iray fambolem-bary ao Jitpur Fedi, Kathmandu. Toerana-fahatelo, nandresy tamin'ny sokajy tsiky Nepaley. Sary avy amin'i Sulav Bhakta Shrestha. Nahazoana lalana: Klioban'ny Mpakasary fanao an-gazety, Nepal.
Ankizy ao an-toerana milalao baolina kitra eo ambony tafon'ny trano iray nentim-paharazana ao amin'ny Kaomitin'ny Fampandrosoana ny Tanànan'ny Taksera ao Rukum. Koa satria tsy ampy ny tany filalaovana eny amin'ireo faritra havoana mideza, dia ireo tafo no nosafidian'ireo ankizy. Toerana-voalohany, nandresy tamin'ny sokajy fanatanjahantena. Sary avy amin'i Surbindra Kumar Pun. Nahazoana lalana: Klioban'ny Mpakasary fanao an-gazety, Nepal.
Fijerin'ny mason'ny vorona an'ireo roa mpitaingina bisikileta an-tendrombohitra tao Muktinath, Mustang. Toerana-fahatelo, nandresy tamin'ny sokajy fanatanjahantena. Sary avy amin'i Umesh Shrestha. Nahazoana lalana: Klioban'ny Mpakasary fanao an-gazety, Nepal.
Ho entina aminà fampirantiana ireo 150 sary voalohany tamin'ny fifaninanana, izay hitety tanàna Nepaley dimy samihafa.
Sary nalaina avy amin'ny fitaovana ofisialin'ny Klioban'ny Mpakasary fanao an-gazety, Nepal.